September 2010 | TechSectors
Letters To My Daughter (2)
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲမှာ Websites တွေ လည်တာ ပတ်တာလည်း များပြီ - ဟိုနေရာမှာလည်း Account လုပ်လာ - ဒီနေရာမှာ Account လုပ်လာ - ဒီလိုဆို မကြာခင်မှာ သမီး Passwords တွေကို မှတ်မိဖို့ အခက်အခဲ ရှိလာလိမ့်မယ်။ အဲ့အတွက်တော့ Site တစ်ခုမှာ တစ်မျိုးစီပြောင်းပြီး ပေးလာခဲ့တဲ့ သမီးရဲ့ passwords တွေကို KeePass ကနေ တာဝန်ကျေကျေနဲ့ မှတ်သားပေးပါလိမ့်မယ်။ KeePass လို့ ပြောလိုက်လို့ Password တွေ မှတ်ထားဖို့ရာ ဒီတစ်ခုတည်းလား ဆိုပြီး သမီးမေးလိမ့်ဦးမယ်။ သူနဲ့ သဘောတရားတူပြီး လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေ မဆိုစလောက်ပဲ လွဲတဲ့ တစ်ခြား Software တွေလည်း ရှိသေးတယ် သမီး - အဲတာကိုတော့ ဖေဖေရေးခဲ့တဲ့ Passwords များ လုံခြုံရေး သတိပြုနိုင်ကြစေရန် ဆိုတဲ့ စာထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်ပြီး Password နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် မှတ်ရခက်တဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ Password ပေးဖို့ အမြဲ အပျင်းကြီးတတ်တဲ့ သမီးလေးက Account လုပ်တိုင်း လွယ်လွယ်ကူကူ Password တွေ ပေးတတ်တာ ဖေဖေ သတိထားမိတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်သေးခင်မှာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ခန့်မှန်းရ အင်မတန်လွယ်တဲ့ သမီးရဲ့ Passwords တွေကို သူများတွေ အလွယ်တကူ သိသွားပြီး သမီး တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာတွေ ဆုံးရံှုးရလိမ့်မယ်။ အဲလို မဖြစ်အောင် Password တွေကို ဘယ်လို ပေးမလဲ - ကိုယ်ပေးတဲ့ Password တွေ ကြံ့ခိုင်မှု ရှိအောင် ဘယ်လို စစ်ဆေးမလဲ ဆိုတာ သင့် Password မည်မျှ ကြံ့ခိုင်ပါသနည်း ?? ဆိုပြီး သမီးအတွက် ဖေဖေရေးထားပေးတယ်။
အင်တာနက်ထဲ ရောက်ပြီဆိုရင် သမီး ဟို ဆိုဒ်ဝင် ဒီ ဆိုဒ်ထွက်နဲ့ စာတွေဖတ်ရင်း - သိချင်တာလေးတွေ လေ့လာရင်း Blog ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး Personal Web စာမျက်နှာတွေအကြောင်းကိုလည်း သတိထားမိ လာလိမ့်ဦးမယ်။ အဲလို သတိထားမိလာတဲ့ တစ်နေ့မှာ Blog တစ်ခု ဘယ်လို တည်ဆောက်ရတယ် ဆိုတာ သမီး သိချင်လာလိမ့်မယ်။ Personal Blog တစ်ခုကို Limit ကန့်သတ်ချက် မရှိ Free ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ Blog Services တွေ တော်တော်များများရှိပြီး - သူတို့တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘယ်လို အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ သမီး ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အားလုံးထဲမှာ ဖေဖေ Blog ရေးခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက် စိတ်ချမ်းသာဖို့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး Free ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တာ Blogger ပဲ ဆိုတာတော့ သမီးသိအောင် ညွှန်းလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ Blog တစ်ခု ဘယ်လို တည်ဆောက်ရတယ် ဆိုတာ ( MM versions ) Computer ebooks collection ထဲမှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖေဖေထည့်ထားပေးတယ်။ ခုဒီနေရာမှာတော့ Blog တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်တယ် ဆိုတာထက် Blog Post တစ်ခုကို ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်နေရာမှာ Blog Post တစ်ခုကို အရင်ဆုံး ပုံစံချပြီး သိမ်းထားသင့်မယ် ဆိုတာ ပြောပြချင်တယ်။ Blog Post တစ်ခုကို အကြမ်းထည် ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ ဖေဖေတို့ လုပ်ဆောင်နေကျ စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Microsoft Office မှာ အကြမ်းရေးပြီးမှ Blog Post ထဲကို Paste လုပ်ပြီး Publish ပေးလို့ ရသလို - Blogger ထဲမှာပဲ တစ်ခါတည်း တန်းရေးပြီး Publish ပေးလို့လည်းရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲတာတွေ အားလုံးထက် ကောင်းတဲ့ နောက်နည်းလမ်း တစ်ခုက Google Docs ကို သုံးပြီး Blogger ကို တိုက်ရိုက် Post တင်တဲ့ နည်းပဲ။ Google Docs ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ အကြောင်းကို အသုံးဝင် Google Docs Features များအကြောင်း ဆိုပြီး ရေးထားခဲ့ဖူးတယ်။ သမီး Blog ရေးဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ တစ်နေ့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။
အင်တာနက်ထဲမှာ လှည့်ပတ်လေ့လာပြီ ဆိုရင် မဖြစ်မနေ သတိထားရမယ့် အချက်တစ်ချက်လည်း ရှိသေးတယ် သမီး - အဲတာကတော့ သမီးလည်း ကြားဖူးနားဝ ရှိနေတဲ့ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ ရဲ့ အန္တရာယ်ပဲ။ Virus တွေရဲ့ အန္တရာယ် နဲ့ Antivirus တွေရဲ့ တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းကို ဖေဖေ အကြမ်းဖျဉ်းသုံးသပ်နိုင်အောင် ရေးထားတဲ့ Virus အမျိုးအစားများနှင့် Virus ကာကွယ်နည်းများ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သမီးလေး ဖတ်ထားမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါမှ ဘာတွေက ဘယ်လို အန္တရာယ်ရှိပြီး သူတို့ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်း သမီး သိထားနိုင်လိမ့်မယ်။ အဆော့အရမ်း သန်တဲ့ ဖေဖေ့သမီးလေးက အင်တာနက်ထဲရောက်ရင်လည်း ဂိမ်းတွေ ဆော့ဦးမှာ သေချာတယ် - ဒီလိုဆိုရင်တော့ ငွေကုန် ကြေးကျနည်းပြီး မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများ နှစ်သက်ကြတဲ့ Facebook က ဂိမ်းလေးတွေ အကြောင်း သမီးသိထားမှ ဖြစ်ဦးမယ်။
အဲ့အတွက် Top 20 Facebook Games ဆိုတာကို သမီး ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်။ ဒါမှ ဘယ်ဂိမ်းလေးတွေ သမီးဆော့ဖို့ ပိုအဆင်ပြေမယ် ဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်း သိပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းဆော့တာတော့ ဟုတ်ပြီ - ဒါပေမယ့် ဂိမ်းလေးလည်း ဆော့ရင်း ကုသိုလ်လည်းရ ပညာလည်းကျန်မယ့် တစ်ခြား ဂိမ်းတစ်ခုလည်း ဖေဖေက ညွှန်လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဘယ်ဂိမ်းလေးလဲ ဆိုတာတော့ သမီး Donation + Game = FreeRice ကို ဖတ်ရလိမ့်မယ်။ တစ်ခြား အာလာဒင် တို့ Mario တို့ သမီးဆော့ချင်သေးတယ် ဆိုရင် ဂိမ်းသေးသေးတွေ သမီးဆော့နိုင်ဖို့ ဂိမ်း ဆော့ရအောင် ဆိုပြီး ဖေဖေရေးထားတာ ရှိသေးတယ်။ သီချင်းဆိုရင် ငယ်ငယ် မွေးကင်းစလေးတည်းက ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့ လိုက်ဆိုတတ်တဲ့ သမီးက ခုလည်း သီချင်းတွေ နားထောင်ဖို့ အင်တာနက်ထဲမှာ လိုက်ရှာဖြစ်မှာ မလွဲဘူး - ဒါဆို အဆင်ပြေပြေနဲ့ သမီးလိုချင်တ့ဲ သီချင်းတွေ ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ အင်တာနက်အတွင်း သီချင်း ရှာဖြွေခင်း ဆိုတာကိုလည်း သမီး ဖတ်ရလိမ့်ဦးမယ်။ ကြုံလို့ တစ်လက်စတည်း ပြောရရင် အင်တာနက် ထဲမှာ သီချင်းပဲ ရှာရှာ - Applications တွေပဲ ရှာရှာ အလွယ်တကူနဲ့ လိုချင်တာကို အမြန်ဆုံးရှာလို့ တွေ့နိုင်တာ Torrent Sites တွေမှာပဲ ဆိုတာ သမီးကို သိစေချင်သေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Torrent တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ သူရဲ့ သဘောတရား တစ်ချို့ သမီး သိနားလည်ထားဖို့ လိုသေးတယ်။ အဲတာကိုနားလည်ဖို့တော့ Torrent ဘာလဲ Torrent ဘယ်လဲ ?? ဆိုတာ သမီး ဖတ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဆက်စပ်ပြီး သတိပေးလိုက်ချင်တာ Torrent Sites တွေမှာ တစ်ချို့ Sites တွေက Applications တွေ Download ချလိုက်ရင် ဖေဖေ အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့ပြီးတဲ့ viruses, spyware, scareware, trojans ဆိုတာတွေ မနည်းမနော ပါလာတတ်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် အလကားရတာပဲ ဆိုပြီး Torrent Sites တွေက ပေးထားသမျှကို ယုံမှတ်မှားပြီး သမီးရဲ့ စက်မှာ Install မလုပ်စေချင်ဘူး - ကိုယ် ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်တဲ့ Applications တွေ မှာ Virus ပါလာမလာ ဆိုတာ သမီးစက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Antivirus နဲ့ Scan ဖတ်ပြီး စစ်ဆေးလို့ ရသလို Jotti's malware scan နောက် Virustotal စတဲ့ Online Antivirus Scanner တွေနဲ့လည်း သမီး စစ်ကြည့်လို့ ရသေးတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အင်တာနက်ထဲမှာ ဟိုဒီလျှောက်သွားပြီး မှတ်ထားချင်တာလေးတွေ Note ထုတ်ထားချင်စိတ် ပေါ်တဲ့ အခါ တွေ့ကရာ နေရာမှာ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ မှတ်တာထက် One Note ကိုသုံးပြီး ဖေဖေက မှတ်စေချင်တယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ဖေဖေ အများကြီး ရှင်းပြဖို့ မလိုဘူး - OneNote သုံးပြီး မှတ်စု ရေးကြရအောင် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သမီး ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သမီး နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ Online တက်ပြီ ဆိုမှတော့ ငါ့သမီးလေး Chat တက်ဦးမှာပေါ့ - ဒီလိုဆိုရင် သမီး အမြဲသုံးနေကျ Gtalk အတွက် သိထားသင့်တာလေးတွေလည်း Useful Tips for Gtalk Users ဆိုပြီး ဖေဖေရေးထားပေးတာ ရှိသေးတယ်။
ချစ်သမီးသို့ ပေးစာ အမှတ် ( ၃ ) ဆက်ရန် -
Letters To My Daughter ( 1 )
ကျွန်တော် ဖိုရမ်မှာ စာတွေ တော်တော်များများ ရေးခဲ့ဖူးပါပြီ။ ရေးခဲ့သမျှတွေထဲမှာ တစ်ချို့ အားလုံး ဖတ်ဖြစ်ကြတာတွေလည်း ရှိမယ် - အားလုံး မဖတ်ဖြစ်ကြပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ကျော်သွားခဲ့ကြတာတွေ လည်း ရှိမယ်။ ဒါတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး ကျွန်တော် ရေးခဲ့သမျှ ထဲက အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိ လောက်မယ်လို့ ယူဆမိတဲ့ ဆွေးနွေးချက် တစ်ချို့နဲ့ ကျွန်တော် သိရှိခဲ့သမျှ အင်တာနက်ထဲက သိရှိမှတ်သား ထားသင့်တဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ အချက်အလက်အသစ် တစ်ချို့ကို ဝေမျှနိုင်ဖို့ ချစ်သမီးသို့ ပေးစာများ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လေ့လာ မှတ်သားထားချက် တစ်ချို့ကို သမီးတစ်ယောက်ဆီ ရေးသားထားတဲ့ ပေးစာတစ်စောင်လိုမျိုး ရေးသားဝေမျှ ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ လေ့လာမှတ်သားရင်း ဗဟုသုတများ ဆထက်တစ်ပိုး တိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။
ချစ်သမီးသို့ ပေးစာ အမှတ် ( ၁ )
ဖေဖေ ချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်ရေ -
Photo from www.nateloucks.com
ဖေဖေ ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ Notebook ကို သမီးလေး သဘောကျလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ သမီးက ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်မစိမ်းပေမယ့် အင်တာနက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နဲ့ Apps ရွေးချယ်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အတွေ့အကြုံ နည်းနေသေးလို့ ဖေဖေ့အနေနဲ့ ဖေဖေ သိထားခဲ့တာတွေထဲက အနှစ်ချုပ်ပြီး သမီး နားလည်လွယ်အောင် ပြောပြလိုက်ချင်တယ်။ ဖေ့သမီးလေးက သမီးမေမေလို တတ်သိနားလည်လွယ်တာ မို့လို့ ခု ဖေဖေ ဖော်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ဖတ်ခဲ့ပြီးရင် အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို တီးမိခေါက်မိ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ဖေဖေ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အရင်ဆုံး သမီးလက်ထဲကို Notebook ရောက်ပြီ ဆိုရင် အရင်ဆုံး PC Decrapifier ကို စက်ထဲမှာ သွင်းစေချင်တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စက်တစ်လုံးကို ဝယ်လိုက်ပြီ ဆိုရင် အဲ့ဒီ့စက်ထဲမှာ များသောအားဖြင့် မလိုလားအပ်တဲ့ trial programs တွေ ပါလာလေ့ ရှိတတ်တယ် - အခု ဖေဖေ ညွှန်လိုက်တဲ့ PC Decrapifier ဆိုတာ အဲ့ဒီ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို စဝယ်လိုက်ကတည်းက စက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပါဝင်လာတတ်တဲ့ trial programs တွေကို စစ်ဆေးပြီး Remove လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မလိုအပ်တဲ့ Software တွေကို Uninstall လုပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဘယ် Applications တွေကို အဓိက install လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုမယ် ဆိုတာလည်း သမီးလေး သိထားဖို့ လိုသေးတယ်။ အဲ့အတွက် သမီး 2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး လိုအပ်မယ့် Applications တွေကို စက်နဲ့ မကွာ ဆောင်ထားဖို့ မှာချင်တယ်။ သမီးက Notebook လေးရရင် အင်တာနက် ကလည်း သုံးဦးမှာ ဆိုတော့ Browser ရှိဖို့လည်း လိုသေးတယ်။ ပုံမှန်အနေနဲ့ ကတော့ Windows တစ်ခု တင်လိုက်ရင် Internet Explorer ဆိုတဲ့ Browser က စက်ထဲမှာ နဂိုတည်းက ပါလာပြီးသားပါ - ဒါပေမယ့် သူက Websites တွေကို Browse လုပ်တဲ့နေရာမှာ တစ်ခြား Browser တွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မသိမသာလေး နှေးနေတတ်တယ်။ ဒါတင်မကဘူး တစ်ခြား Browser တွေမှာ Browser တွေနဲ့ အတူ ယှဉ်တွဲပြီး အသုံးချလို့ ရတဲ့ Add-ons ဆိုတာ မနည်းမနော ရှိပြီး IE မှာတော့ တော်တော်လေး နည်းနေသေးတယ် - လိုရင်းကို အတိုချုံးရရင် အဲတာတွေကြောင့်မို့ အင်တာနက် ထဲမှာ လှည့်ပတ်လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဆို သမီးစက်ထဲမှာ Mozilla Firefox သွင်းထားစေချင်တယ် – တစ်ခြား Browsers တွေ အင်တာနက်ထဲမှာ အများအပြား ရှိသေးပေမယ့် လတ်တလော အခြေအနေမှာ Firefox က မြန်မာ Font နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း လျောလျောလျူလျူ အဆင်ပြေနေလို့ ဖေဖေက အဲတာကို ရွေးဖို့ပဲ အကြံပေးလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ချက်က Browser တစ်ခု သုံးပြီ ဆိုရင် Browser မှာပါတဲ့ Browser bookmarks ဆိုတာကို သုံးတာထက် ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် Google bookmarks တို့ Delicious add-on တို့ကို သုံးပြီး ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ websites တွေရဲ့ addresses တွေကို သိမ်းစေချင်တယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖေဖေ အကောင်းဆုံး Bookmark Management Tools များ ဆိုပြီး သပ်သပ်ရေးထားဖူးတယ်။ သမီး အားတဲ့ တစ်နေ့ ဖတ်ကြည့်ပေါ့။ နောက်ပြီး Browser တစ်ခု ကို သုံးတော့မယ်ဆို Browser ရဲ့ Start page တွေက အရေးကြီးတယ်။ အဲ့အတွက်တော့ သမီး Browsers များနှင့် Start pages ဆိုတာကို ဖတ်ထားသင့်တယ်။ နောက်ပြီး Mozilla Firefox ကို သုံးတဲ့ သမီးရဲ့ Notebook မှာ Browsing area ကို ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် မြင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးယူနိုင်မယ် ဆိုတာ Firefox 3^ + Stylish ဆိုပြီး ဖေဖေ ရေးထားပေးသေးတယ်။ သမီး Notebook သေးသေးလေးမှာ စာဖတ်ရတာ ကျဉ်းကျပ်သလို စိတ်ထဲ ခံစားလာရရင် သမီး ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ကြည့်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
နောက် တစ်ခုက Email accounts လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်တော့မှ တစ်ခုတည်း မလုပ်စေချင်ဘူး - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သုံးတဲ့ Email account နဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း - Websites တွေမှာ သုံးဖို့ အတွက် ဆိုပြီး အနည်းဆုံး Emails နှစ်ခုတော့ Gmail.com မှာ လုပ်ထားစေချင်တယ်။ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း - ကိုယ့်မိသားစု - ချစ်သူ အဲလို လူမျိုးတွေကို Primary Email Address မှာ Add ထားပေါ့ - Online က ရင်းနှီးတဲ့သူ နောက် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ သူတွေကိုတော့ Secondary Email Address မှာ Add ထားပေါ့ - Mail ဆိုတာမျိုးက Gmail တစ်ခုတည်း Account လုပ်လို့ ရတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ - တစ်ခြား Yahoo တို့ Hotmail တို့ AOL တို့ အများကြီး ရှိသေးတာပေါ့ - ဒါပေမယ့် Gmail ကတော့ ဖေဖေ သုံးဖူးသမျှထဲမှာ လတ်တလော အဆင်အပြေဆုံးလို့ ထင်မိတယ်။ လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးစီမို့လို့ - ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးပါလို့တော့ မဆိုလိုချင်ပါဘူး - Google ကို ညွှန်းပြီ ဆိုမှတော့ ဖေဖေရေးထားတဲ့ Google ၏ ပြောင်းလဲမှုများ အကြောင်း ကိုလည်း သမီးသိထားသင့်သေးတယ်။ ဒါကို ဖတ်ထားမှ Google က အရင်တုန်းကနဲ့ ခုနဲ့ ဘာတွေ ကွာလာသလဲ - ဘာတွေ ပြောင်းလဲ ထူးခြားကောင်းမွန်လာသလဲ ဆိုတာ သမီးသိနိုင်လိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက တကယ်လို့ Websites တွေ အင်တာနက်ထဲမှာ လျှောက်ကြည့်ရင်း နဲ့ Site တစ်ခုခုကို သဘောကျသွားတဲ့ အခါ အဲ့ ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ် ဒါမှမဟုတ် Software - သီချင်း ဆိုတာမျိုးတွေ Download ချနိုင်ဖို့ သူတို့က သူတို့ Site မှာ Member ဖြစ်မှ Download ချခွင့်ပေးမယ် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း သမီးလေး ကြုံလာရလိမ့်မယ်။ အဲလို အခြေအနေမှာ မဖြစ်မနေ သူ့ Site မှာ Account လုပ်ဖို့ လိုလာပါလေရော - အဲလို ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲ ရောက်လာရင် တော်ယုံ Site ဆို ဘယ်တော့မှ ကိုယ် သုံးနေကျ ကိုယ့်အတွက် အရေးပါတဲ့ Primary Email Address ကို ပေးပြီး Account မလုပ်ပါနဲ့ - Secondary Email Address ကို ပေးချင်ပေး - အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် အကောင်းဆုံး နည်းတစ်ခု အနေနဲ့ ၁၀ မိနစ်ခံ Mail တစ်ခုကို 10MinuteMail.com မှာ အလကား ယူပြီး ပေးလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဆိုဒ်ကနေ Registration Confirmation ပို့လာရင်တောင် အဲလို မေးမျိုးက ၁၀ မိနစ်အတွင်း ကိုယ့် 10MinuteMail.com က Inbox ထဲကို ဝင်လာတတ်တာမို့လို့ အဲဒီ ၁၀ မိနစ်ခံ Mail ရဲ့ Inbox ထဲကနေ Confirm လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်ခံ Mail ဆိုတာ သမီး နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် အဲလိုကပ်တီးကပ်ဖဲ့ နိုင်တဲ့ Sites တွေ - Email Account တစ်ခုပေးလိုက်ရင် Spam အများအပြား ပို့တတ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေ - ကိုယ့် Email Account ကို ရောင်းစားတတ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေရဲ့ ရန်က ကာကွယ်ပေးဖို့ ၁၀ မိနစ်ပဲ ခံတဲ့ Temporary Email Accounts တွေ ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာပေါ့ - ၁၀ မိနစ်ပြည့်ပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ Temporary Email Accounts တွေကလည်း အလိုလို ပျက်သွားတာမျိုးကို ခေါ်တယ် - သူ့ကို သုံးခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Primary Email Address ရော - Secondary Email Address ရော သူများလက်ထဲ မရောက်တဲ့ အပြင် ကိုယ့် Mail လိပ်စာကို ကာကွယ်ပြီးသားလည်း ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် သမီး -
ချစ်သမီးသို့ ပေးစာ အမှတ် ( ၂ ) ဆက်ရန် -
3:11 AM LeaveaComment
Google Translate အကြောင်းကိုတော့ အကျယ်ချဲ့ပြီး မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး - Google နဲ့ ရင်းနှီးသူတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းသာမက တစ်ခြား နိုင်ငံခြား ဘာသာရပ် တစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ကိုင်လှုပ်ရှား နေရသူတိုင်း/သင်ကြားလေ့လာ နေရသူတိုင်း လူတိုင်းနီးပါး မဖြစ်မနေ အားကိုးကြရတာ ဒီ Google Translate ပါပဲ။ Google Translate ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အပြည့်စုံကြီး ကောင်းမွန်လှပါတယ်လို့ မဆိုသာပေမယ့် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အသိမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား ဘာသာရပ် တစ်မျိုးနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ Webpages တွေကို ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ လေ့လာလိုတဲ့ အခါမှာ ( ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လို့ ဘာကြောင့်သုံးရသလဲဆို Google Translate က မြန်မာလို မရလို့ပါ ) စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်း - ဒါမှမဟုတ် - စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းကို ဘာသာပြန်လို့ ရသလို - Webpages တစ်ခုလုံးကိုလည်း URL ရိုက်ထည့်ပြီး မြန်မာစာ ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ အကျွမ်းကျင်ဆုံး ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆီ ပြောင်းလဲယူလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ခုပြောချင်တာ Google Translate ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို အမွှန်းတင်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး - Google Translate ရဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ Google Translate ကို ကနဦး မိတ်ဆက်ပေးနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Google Translate ဟာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသလို စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်း - စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းကစလို့ - Webpages တစ်ခုလုံးကိုလည်း URL ရိုက်ထည့်ပြီး ဘာသာပြန်လို့ ရတယ် ဆိုတာတွေကြောင့် အရမ်း အသုံးတည့်ပါတယ်လို့ ဘယ်လောက် ပဲဆိုဆို တကယ်တမ်း လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား Conversation လုပ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ နိုင်တော့ပါဘူး - ဆိုလိုတာ ဘာသာစကား တစ်မျိုးစီပြောကြတဲ့ လူနှစ်ယောက် တွေ့ကြတယ်။ တစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လို မေးတယ် - တစ်ယောက်က ဂျာမန်လို ပြောတယ်။ ဂျာမန်လူက အင်္ဂလိပ်လို မတတ်ဘူး - အင်္ဂလိပ်လူက ဂျာမန်လို နားမလည်ဘူး - ဒီလိုဆို ဘယ့်နှယ် လုပ်ကြမလဲ - Google Translate ကလည်း ဒီနေရာမှာ ဝင်ပြီး ကြားခံ ဘာသာပြန်တစ်ယောက် အနေနဲ့ စကားပြော မပေးနိုင်ဘူး - စတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲ ကို ပြေလည်စေဖို့ Google Translate က ခုကြိုးစားနေပါပြီ။ အရင်က သူ မဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာစကား မတူညီသူ နှစ်ဦး ကြားက စကားပြန်တာဝန်ကို မကြာမှီမှာ သူ ယူပါတော့မယ်။ ဆိုလိုတာ သူ စကားပြန် လုပ်ပေးပါတော့မယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်က တစ်ဖက်ကလူက ဘာသာစကား တစ်မျိုးနဲ့ ပြောလိုက်တာကို တစ်ခြားတစ်ဖက်က နားထောင်သူဆီ ကြားနာသူ နားလည်စေမယ့် ဘာသာစကားကို ပြန်ပြောင်း ပြောဆိုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်တာပါ။ ဒါကို သူတို့က Google Translate ရဲ့ Conversation Mode လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
Google Translate Application ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ဟာ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို စာရိုက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် - ပါးစပ်ကနေ ပြောပြီး ဖြစ်ဖြစ် - ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းကနေ အခြားဘာသာ စကား အမျိုးပေါင်း ၅၀ ထဲက ကြိုက်ရာတစ်မျိုးဆီ ပြောင်းလဲ ပြန်ဆိုလို့ ရပါသတဲ့ - မယုံနိုင်စရာပါပဲ - ဒါပေမယ့် ဒါကိုပဲ Google Translate က လက်တွေ့ သက်သေ ပြခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့ သက်သေပြ တင်ဆက်ခဲ့သူ နှစ်ယောက်ကတော့ Google ရဲ့ Product Management Director - Hugo Barra နဲ့ - Kyle ပါ။ အဲ့ထဲမှာ Hugo Barra က Berlin မြို့ကို ရောက်လာတဲ့ Tourist တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Kyle ကတော့ Berlin မြို့မှာ ရှိနေတဲ့ ဖိနပ်ရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်က အရောင်းတာဝန်ခံ တစ်ယောက် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်မှာ Hugo Barra က အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်တယ် - ဂျာမန်လို မသိဘူး - Kyle က ဂျာမန်လိုပဲသိတယ် - အင်္ဂလိပ်စကား နားမလည်ဘူး - ဒီလူနှစ်ယောက်ကို Google Translate ရဲ့ Conversation Mode ကနေ ဘယ်လို အကူအညီပေးခဲ့သလဲ - ဒါလေးကို အောက်ဖော်ပြပါ ဗွီဒီယိုထဲမှာ ကြည့်ရှု ခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Video လေးဟာ Google Translate ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအကြောင်း တစ်ခုတည်းကို အဓိကထား တင်ဆက်သွားကြတာ မဟုတ်ပါဘူး - သူ့လိုမျိုးပဲ နောက်ထပ် နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ Cloud Computing Innovation - နောက် Product Marketing Manager - Brittany Bohnet ရဲ့ TV မှာမှ Internet Browser ပါဝင်လာပြီး သာမန် ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေကျ TV တွေထက် ပိုမိုအသုံးဝင် ထူးခြားလာတဲ့ Google TV အကြောင်း ဆိုတာတွေပါ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း လေ့လာကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Google Translate ရဲ့ Conversation Mode ဟာ မကြာခင်လပိုင်း အတွင်းမှာ အတည်ပြု ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ခြား Languages တွေကိုလည်း အနှေးနဲ့ အမြန် Support လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမယ်လို့ တင်ပြသွားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာတည်းက ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီလို Conversation နည်းပညာဟာ ခုချိန်မှာ တကယ်ကို ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှောက်ဆီ ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ အစပျိုး ကနဦးကာလမှာ ချွင်းချက် - အားနည်းချက်တွေ ရှိနေနိုင်မှာ သေချာပေမယ့် ကနဦး ခြေလှမ်းအစပျိုးမှုကနေ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဒီ့ထက်ပိုမိုတိုးတက် မြင့်မားတဲ့နည်းပညာလမ်းကြောင်းဆီ ချဉ်းကပ်သွားနိုင်လိမ့် မယ် ဆိုတာလည်း မြေကြီးလက်ခပ်မလွဲပါဘူး -
ဟုတ်ပါပြီ - Google Translate ရဲ့ Conversation Mode ဒီ့ထက်ဒီ့ထက် အဆင့်မြှင့်တင် ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ့် တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွေ Android phone တစ်လုံးကိုင်လို့ ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးတစ်ပတ်လောက် တူတူ ခရီးတူတူ ထွက်လိုက်ကြပါစို့ - :)
Ubuntu 10.10 Maverick Alpha3release က ထွက်တာ ကြာပါပြီ - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လည်း ချက်ချင်း မပြောင်း ဖြစ်ဘူး - မပြောင်းဖြစ်ဘူး ဆိုတာကလည်း လတ်တလောက စက်ထဲမှာ Ubuntu 10.04 LTS က ရှိနေတော့ Alpha တွေ မသွင်းချင်ဘူး - သိတဲ့ အတိုင်း Alpha release တွေက အရမ်း Bugs တာတွေ များပါတယ်။ အဲတာနဲ့ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်း Beta ထွက်လာတယ်။ Beta ဆိုတော့ ဘာပဲ ပြောပြော Alpha လောက်တော့ မဆိုးလောက်တော့ဘူးပေါ့ - အဲတာနဲ့ မနေ့ညက Ubuntu 10.10 Maverick ကို Download ချပြီး တင်လိုက်ပါတော့တယ်။ Bugs တာတွေ တွေ့လည်း Feedback လုပ်မယ်ပေါ့နော် - ထင်ထားတဲ့ အတိုင်း Beta မို့လို့ Alpha ထက်တော့ Bugs တာတွေ တော်တော်လေး နည်းသွားပါပြီ - ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ တော့ ဂယောင်ခြောက်ဆယ်လေးတွေ နဲနဲ ဖြစ်နေသေးတာ တွေ့မိတယ်။ ကိုယ်မှားတာလိုလို သူ Bugs တာလိုလိုနဲ့ပေါ့ - လိုက်ပြင်ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းကောင်း သွားတာနဲ့ Bugs တယ်လို့ စာရင်းထဲ မသွင်းလိုက်တော့ဘူး - ကိုယ့် Errors လို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါတယ်။
အခု Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat Beta ကို တင်ထားရင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေ့တာလေးတွေ ပြောင်းလဲ မှုလေးတွေ အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ ဒီအကြောင်းကို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
Ubuntu ရဲ့ default theme ကို Maverick မှာ နည်းနည်းလေး Refined လုပ်ထားတာ တွေ့မိပါတယ်။
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat မှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ icon set တွေက အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။ Home icon - Toolbar buttons နဲ့ တစ်ခြား icons တော်တော်များများလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲ ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က စက်မှာ Windows7နဲ့ Dual-boot တင်ထားတာပါ။
Wallpapers အသစ် ၁ရ ခု ထပ်ပေါင်းဖြည့်ထားတာ တွေ့မိပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေပါ - အရင် Ubuntu 10.04 က Wallpapers တွေထက်တော့ ပိုကြည့်ကောင်းနေ သလိုပါပဲ -
Ubuntu ရဲ့ ပုံစံအသစ် Sound Menu ကတော့ အရင်ကထက် တော်တော်လေးကို ခြားနားသွားပါတယ်။ Buttons ပုံစံတွေကိုလည်းပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ နောက် playlist support function - သီချင်း info ကို ပြတဲ့ font တွေရဲ့ size တွေကို လျော့ထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ အားထားရာ ပင်မအရင်း အမြစ် Ubuntu Software Centre ကိုတော့ Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat မှာ ခုလို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat မှာ install လုပ်ဆောင်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ တော်တော်ကြီးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ install လုပ်ဆောင်ရာမှာ လွယ်သထက် လွယ်ကူအောင်ပေါ့လေ - ဒါပေမယ့် ကိုယ်က မသိတော့ စစချင်း နဲနဲတောင် ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သိသွားတော့လည်း အရင်ကထက် ပိုလွယ်သွားပါလားပေါ့ - :)
ဘယ်အဆင့်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ Installation ပုံစံအသေးစိတ်ကို ဒီအောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ZawGyi နှင့် Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat ကိုတင်တော့ စိတ်ထဲ တစ်ထင့်ထင့် ဖြစ်နေတာ မြန်မာဖောင့်ပေါ့ - ကိုယ်စမ်းတာကလည်း Beta ဖြစ်နေတော့ ပိုပြီး ထင့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံကောင်းစွာနဲ့ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ အရင်လိုပါပဲ - ဘာအခက်အခဲမှကို မတွေ့ခဲ့တာ - အဲတာနဲ့ မြန်မာဖောင့်ရရချင်း ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မတင်ရသေးခင် မှတ်မှတ်ရရ Screen Record လေး လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲတာကိုတော့ ဒီအောက်မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ - မြန်မာဖောင့်လေး ဘယ်လို လှလှပပ မြင်ရလည်း ဆိုတာ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
အဲတော့ စိတ်ပါဝင်စားသူများ စမ်းသပ်နိုင်အောင် Links လေးတွေ ညွှန်လိုက်ပါမယ်။ တစ်ခါမှ မသုံးဖူးသူတွေ - သာမန် လျောလျောလျူလျူ Stable version ကိုပဲ သုံးချင်သူများ မစမ်းသပ်ပါနဲ့ - Beta တွေမှာ Bugs တာတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်စာဖတ်ပြီး စမ်းသပ်မယ်ဆိုသူများ - အတွေ့အကြုံရှိသူများကတော့ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Release notes ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Game + Donation = FreeRice
မနေ့က ထင်မှတ်မထားပဲ Profile မှာ ကို hellboy ကနေ ဒီလိုလေး လာရေးသွားပါတယ်။
ကိုကေဇက် တောင်းဆိုတာပါဗျာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးဘာလေးရေးပါလားဗျာ.. ကျနော်ဖတ်ချင်လို့ပါ အကိုက ဘာမဆို အသေးစိတ်ရေးတော့ ဖတ်ရတဲ့ သူလည်း အသေးစိတ်သိတာပေ့ါဗျာ လေ့လာသင့်တဲ့ ဆိုက်တွေ ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်တွေ အခွေတွေ .. အစုံပေါ့ဗျာ အကို အဆင်ပြေမှပါ..
ကျွန်တော်လည်း စစချင်း ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး - ကျွန်တော်က နည်းပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ဖတ်ဖူးခဲ့တာ နားလည် ခဲ့တာတွေလောက်ပဲ စီကာပတ်ကုံး ပြန်ပြောပြတတ်ခဲ့တာ - နည်းပညာနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီး သိပ်မဆိုင်တဲ့ Language မျိုးကျတော့ Post လုပ်ပြီး ရေးရလောက်အောင် ကျွန်တော်က အကြောင်းအရာတွေ မစဉ်တတ်ဘူး - ဘာသာစကား ဆိုတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခု က ကျွန်တော် ခုရေးနေတဲ့ တောက်တိုမယ်ရ နည်းပညာဆောင်းပါး တွေထက် အများကြီး ကျယ်ပြန့်ပါတယ် - သူမှ မဟုတ်ဘူး တစ်ခြား ဘယ်ပညာရပ်မဆို တကယ်တမ်း ကျွန်တော်တို့ သင်ကြမယ် ဆိုရင် သူ့ သင်ရိုးနဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ စသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ သင်ကြရတာမျိုး မလား - ကျွန်တော်က သင်ရိုးတွေ စည်းမျဉ်းတွေ သင်ကြားမှု နည်းစနစ် ဆိုတာတွေ မသိတော့ တွေ့တဲ့ အကြောင်းအရာ ဆွဲရေးရင် Language တစ်ခုကို သင်တာ မဟုတ်တော့ပဲ စကားစမည် ပြောသလို ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ အတွက်မှ အကျိုးမရှိမှာ စိုးမိပါတယ်။ ဒါက တစ်ပိုင်း -
အဲလိုမျိုး ဟိုလျောက်တွေး ဒီလျောက်တွေး စဉ်းစားရင်း ဘာလုပ်ပေးရင် ကောင်းမလဲ - ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော် - ကျွန်တော်ကိုယ်၌ကလည်း တကယ်တမ်း ဆရာ မလုပ်ဘူးတော့ စာနဲ့ ပတ်သတ်တာဆို တစ်ယောက်ယောက်က သိချင်တယ် ဆိုရင် ပြပေးချင်စိတ်တော့ ရှိပါရဲ့ ဒါပေမယ့် နားမလည်မှာကလည်း ကြောက်မိတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် က လောဘကြီးတတ်တယ်။ လောဘကြီး တတ်တယ် ဆိုတာ လူတစ်ယောက်က နားမလည်လို့ မေးလာရင် ကိုယ် တကယ်တမ်း နားလည်တာမျိုးဆို သူ နားမလည်မချင်းကို ပြောပေးချင်တာ - ရှင်းပေးချင်တယ် - ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှု စွမ်းရည်ချင်း မတူညီကြဘူး - တစ်ချို့ကျတော့ တစ်စိတ်လောက် ပြလိုက်တာနဲ့ တစ်အိတ်လောက် သိပြီး - တစ်ချို့ကျတော့ ( ၄ ) - ( ၅ ) ခါ အာပေါက်အောင် ပြောလည်း ရှေ့ပြော - နောက်မေ့ အူလည်လည်နဲ့ လုံးဝ လိုက်မမှီသလို ခေါင်းကုပ်ပြတဲ့ သူမျိုးတွေလည်း ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်က အာပေါက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဘယ်လိုပဲပြောပြော နားမလည်တဲ့ သူမျိုးဆို ကျွန်တော်က အလိုလိုနေရင်း ဒေါသထွက်လာရော - အဲတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် - ငါ ဘယ်တော့မှ ဆရာလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး :D
ဒါပေမယ့်လည်း လိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ ကူညီချင်တယ် - အဲတော့ နိုင်သလောက်လေး ကူညီမယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် - အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကူညီမယ် စိတ်ထဲ စဉ်းစားလိုက်တော့ အရင်ဆုံး ဂိမ်းတစ်ခု သွားသတိရတယ်။ :D စာအကြောင်း မေးခါမှ ဂိမ်းဆော့ခိုင်းပြန်ပြီ ထင်ဦးမယ်။ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော်လည်း လောလောဆယ် စာဖတ်လိုက် အဲ့ဂိမ်းဆော့လိုက် လုပ်နေတာပါ။ ဘယ် ဂိမ်းတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းမှန်း ကျွန်တော် သေသေချာချာ မသိပေမယ့် ဒီ ဂိမ်းလေးကတော့ တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်ဗျာ -
ပြောရရင် ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ အလှူလုပ်နေတာမျိုးဗျ - ဆော့ရတာက အွန်လိုင်းဂိမ်း - ဂိမ်းဆော့ရင်း တစ်ဖက် ကိုယ့်အတွက်လည်း ပညာရသလို - တစ်ခြားသူတွေကို အလှူပြုသလို ဖြစ်တယ်။ ပြောရရင် တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ်ပေ့ါ - အပျင်းလည်းပြေ - ပညာလည်းရ - ကုသိုလ်လည်းယူ -
ဂိမ်းနာမည်ကတော့ Free Rice ပါ။ သူက အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို တူရာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးတွေ ရွေးပေးပြီး - ကိုယ် က သူဖော်ပြထားတဲ့ စကားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်တူတဲ့ တစ်ခြား စကားလုံးတစ်လုံး ရွေးပေးရပါတယ်။ တစ်လုံးမှန်တာနဲ့ ဆန်စေ့ ၁၀ စေ့ကို United Nations World Food Program ကို ကိုယ့်အစား လှူဒါန်းပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ဘေး ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံ တွေ အတွက်ပေါ့ -
တစ်လုံးမှန်မှ ဆန် ၁၀ စေ့ ဆိုတော့ နည်းလိုက်တာလို့ ထင်စရာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်ပါ - စကားလုံး တစ်လုံးကို နောက်ဘယ်စာလုံးနဲ့ တူလဲ ဆိုတာ ရှာရတာ တကယ်တမ်း နားလည်တဲ့ သူဆို ၁ စက္ကန့် ၂ စက္ကန့်ပါပဲ - ဒါတင်မက တကယ်တမ်း နိှုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကိုယ် ဒီလို တစ်လုံးမှန်လို့ ဆန် ၁၀ စေ့ရနေချိန်မှာ တစ်ခြား ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းက ကိုယ်နဲ့ အတူ ဆော့နေတဲ့ သူတွေလည်း ဆန် ၁၀ စေ့ - ၁၀ စေ့ နဲ့ ရနေကြမှာပါ - ဒီတော့ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ၁ စက္ကန့် - ၂ စက္ကန့်ကို ဆန် ၁၀ စေ့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက တစ်ပြားမှ စိုက်စရာ မလိုပဲနဲ့ ကိုယ့်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းလည်းရ သူများကိုလည်း လှူပြီး ဖြစ် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်လဲဗျာ - Farmville တို့ Mafia တို့တောင် တစ်နေ့ လေး - ငါးနာရီ ပေးဆော့ နေကြတာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသူတွေကို ကူညီဖို့ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလေးပဲ ဆော့ပါဦး - ကိုယ့် language လည်း တိုးတက် - တစ်ဖက်သားကို လှူဒါန်းပြီးသားလည်း ဖြစ် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်ပါသလဲ - Free Rice က ဒီနည်းနဲ့ သန်းနဲ့ချီပြီး ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေသူတွေကို ကူညီနေခဲ့တာ October 2007 တည်းက ဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံး တစ်လုံးမှန်ရင် ဆန် ၁၀ စေ့နဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဆန်စေ့လေးတွေ များလာလိုက်တာ ဆော့နေရင်းနဲ့ ကိုယ် စာလုံး တစ်လုံးမှန်ရင်လည်း ပျော်ရသလို ဆန်စေ့လေးတွေ များလာတာ ကြည့်ပြီး ငါ သူများအတွက် လှူနေဖြစ်ပါလား ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်စိတ်လေးကလည်း တကယ်ကို ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဖြေတာ မမှန်လို့ မှားသွားလည်း ပြဿနာ မရှိဘူး - Game Over လည်း မရှိဘူး - ကိုယ်အချိန်ပေးနိုင်သလောက် ဆော့လို့ ရသလို ကုသိုလ်ကလည်း မပြတ်တမ်းရနေပါတယ်။ တကယ်လို့ သူအစပျိုးပေးတဲ့ စာလုံးကို ကိုယ်ဖြေတာ မမှန်ရင် သူက နောက်စာလုံးမှာ ဒီ့ထက်လွယ်တဲ့ စာလုံးလေးတွေကို ပြောင်းမေးပေးပါတယ်။ ဖြေတာမှန်ရင်တော့ စာလုံးလေးတွေက နည်းနည်းလေး ပိုခက်လာပါတယ်။ တစ်ချို့က ထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါက အွန်လိုင်းမှာ တွေ့နေကျ လှည့်ကွက်ကြီးပါကွာ - ညာခိုင်းနေတာပါလို့ - တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး - Free Rice ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ လူ လေးသန်း ကျော်ကို အစာရေဆာ ငတ်မွတ်မှုကနေ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီ ဂိမ်းလေးကလည်း နာမည်ကြီးလာလိုက်တာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ကို ဆော့တဲ့ Players ပေါင်း 40,000 ကျော်ထိလည်း ရှိလာပါပြီ။ ဒီ သီတင်းက ကျွန်တော် လက်တမ်းပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း ဒီဂိမ်းလေးကနေ Pakistan ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီခဲ့တာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အွန်လိုင်း ဂိမ်းလေးပါပဲ။
ဒီ ဂိမ်းလေးကို ဆော့မယ် ဆိုရင် Vocabulary မကြွယ်ဝသေးသူတွေ အတွက် စစချင်းမှာ အခက်အခဲ အနည်းနဲ့ အများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ အခက်ကို ပြေလည်စေဖို့ ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ အကြံဉာဏ်ကတော့ Babylon ကို စက်ထဲမှာ Install လုပ်ဆောင်ထားဖို့ပါ။ တင်ပြီးသွားရင် Babylon ကို ဖွင့်ထားပြီး သူ့ မေးခွန်း စာလုံးလေးကို ဖတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ် နားလည်သလား နားမလည်တာကိုတော့ ရမ်းသမ်း မရွေးပါနဲ့ - တကယ်လို့ နားမလည်ရင် စာလုံးပေါ် Ctrl + Right-click ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို Babylon က အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလိုမျိုး စကားလုံးတွေကို မြန်မာလို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုယ် မသိတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ တစ်ခါတည်း စိတ်ထဲမှာ တွဲကျက်လိုက်ပါ။ နောက် သူနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာပါ။ ကလစ်ပေးပါ - ဒါဆို စာလည်းရ - ဒါနလည်းမြောက် - ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်ပါသလဲ။
Babylon အတွက် မြန်မာစာ ဘာသာပြန်ရဖို့က ဒီ padonma-english-myanmar.bgl 4.391 MB ဆိုတာလေးကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Babylon install လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင် Double-click ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆို မြန်မာဘာသာပြန် မြင်ရပါပြီ။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပြည့်စုံပြီ။ ဂိမ်းလေးဆော့ - Language လေး သင်ရင်း - ဒါနလေး တစ်ခု ပြုကြရအောင်လားဗျာ -
1:41 AM LeaveaComment
ဒီနေ့ ညနေပိုင်း အားလို့ အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင်း Google ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ တွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ အသစ်တွေ့ရင် ဝေမျှချင်တဲ့ စိတ်က ရှိနေတော့ ဒီအကြောင်းလေးကို မိသားစုဆီလာပြီး ဖောက်သည် ချလိုက်ပါတယ်။ အဲတာကတော့ Google Instant အကြောင်းလေးပါ။ Google Instant ဆိုတာ ပုံမှန် လမ်းရိုးအတိုင်း သွားနေတဲ့ Google Search ကို လမ်းသစ်တစ်ခု ဆီ ပြောင်းလဲ မောင်းတင်လိုက်တဲ့ New search enhancement တစ်ခုပါပဲ။ ဘယ်လို ပြောင်းလဲ သွားလဲ ဆိုရင် အရင်က ကျွန်တော်တို့တွေ Google Search Box ကနေ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ အရင်ဆုံး Search Box မှာ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ စာလုံးကိုရိုက် နောက် ပြီးရင် Enter ခေါက် ( ဒါမှမဟုတ် ) Google Search ဆိုတာကို Click ပေးပြီးမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရှာလို့ တွေ့ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။
Google Instant မှာတော့ အဲလို မဟုတ်တော့ပါဘူး - သူက အရင်လို Steps နှစ်ဆင့် မခံတော့ပဲ ကိုယ် ရိုက်တဲ့ စာလုံးကို လိုက်ပြီး Search Results ကိုပါ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးသွားမှာမျိုးပါ။ ဆိုလိုတာ Search Box မှာ စာလုံးရိုက်လိုက်တာနဲ့ သူကနေ Search Results တွေ ဖော်ပြတဲ့ Page ကို တစ်ခါတည်း ခေါ်သွားပြီး ကိုယ့် Search queries ဆုံးတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ် ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Enter ခေါက်စရာ မလိုပဲ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ထိပ်ဆုံးမှာ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက ကိုယ်တစ်လုံးရိုက်ရင် ရိုက်တဲ့ အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားမယ့် Search Results တွေကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း မြင်တွေ့ သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ် - Google Instant ဟာ အရမ်းကို မြန်ပါတယ်။ အရမ်းကို သပ်ရပ် တိကျပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဘယ်လို မေးခွန်းထုတ်ရမလဲ ဆိုတာ အများကြီး စဉ်းစားဖို့ မလိုတဲ့ အပြင် ကိုယ်မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်ပြီး Autocomplete suggestions လုပ်ပေးထားလို့ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် မေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဆုံးအောင် ရိုက်စရာ မလိုပဲ တန်းပြီး Click ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
Google Instant က ဘာတွေ ထူးခြားသွားသလဲ ??
Faster Searches: ကိုယ် ရှာဖွေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Typing မဆုံးခင်မှာ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း မြင်တွေ့နေရလို့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ရှာဖွေတိုင်း ရှာဖွေတိုင်း 2-5 seconds ကြား တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ချွေတာရာ ရောက်ပါတယ်။
Smarter Predictions: အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို သိချင်တယ် - ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမေးရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တောင် ကိုယ် ရှာဖွေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို စတင်ရိုက်သွင်း ရှာဖွေချိန်မှာ သူဖော်ပြလာတဲ့ အကြံပြုချက် ( autocomplete suggestions ) ကို လိုက်ပြီး ကိုယ် သိချင်တဲ့ အကြောင်း အရာနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် ဆွဲယူအသုံးပြုနိုင်လို့ လိုလားချက်ကို အချိန်အနည်းငယ် အတွင်း ပြည့်စုံစေပါတယ်။
Instant Results: စာလုံး စရိုက်တာနဲ့ ဘယ် Results ရမယ် ဆိုတာ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကိုယ့် မျက်စိရှေ့မှာ သိရှိနိုင်လို့ လိုလားချက်နဲ့ သာ ကိုက်ညီရင် စမ်းတဝါးဝါး ရိုက်ရှာစရာ မလိုတော့ပဲ အဖြေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
Google Instant ကို On ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရှာဖွေချိန် နဲ့ Google Instant ကို Off ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရှာဖွေချိန် နှစ်ခုမှာ ဘယ်သူက ပိုပြီး Result ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရရှိနိုင်မယ် ဆိုတာ အောက်ဖော်ပြပါ Graph ကို လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Google Instant ကို Chrome, Firefox, Safari နဲ့ Internet Explorer 8 တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သူ့ကို အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Google Account ထဲကို Sign in ဝင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
အဲလို ဝင်ထားပြီး အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို Google Search Box မှာ စတင်ရှာဖြွေပီ ဆိုတာနဲ့ Google Instant ကနေ ခုလို စတင်ကြိုဆိုပါလိမ့်မယ်။
Google Instant အကြောင်းကို ကျွန်တော် က ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းပါတယ် ပြောပြော သဘောမကျနိုင်သူတွေ အတွက် ကိုယ့် Google Account ထဲကို Sign in ဝင်ထားပြီး ဒီနေရာကို သွားပါ။ စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ Google Instant ကို သွားပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရွေးချယ်ပေးပြီး Save Preferences ကို ပေးပါ။
Google Instant အကြောင်းကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး အကျယ် လေ့လာလိုသူတွေ အတွက် ဒီနေရာကနေ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေမှာ ကျွန်တော် Google Instant အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ ကျွန်တော် ပြောသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင် ခဏ စောင့်လိုက်ပါ။ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Google ကနေပြီး လူတိုင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ Google Instant အကြောင်း ရှင်းလင်းချက် တစ်ချို့ပါ။
ဒါကတော့ Google Instant ကို စမ်းသပ် သုံးစွဲသူ Users တွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေပါ။
Have you ever heard of Steganography ?
Beginner Guide for OneNote 2010
Make your Windows Start-up Faster